Markay Instagram xaqiijiso koontada 🥇 Kuwa raaca ▷ 🥇
Raacayaasha ▷ 🥇
Markay Instagram xaqiijiso koonto
Instagram, maalin kasta waxay ku shaqeysaa cusbooneysiin badan iyo aalado horumarsan aaladdeeda Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa leh xushmad marka Instagram xaqiijiyo koonto. Markii hore, astaantan waxaa heli kara oo keliya caan-baxayaasha ama shirkadaha saamaynta ku leh barta Instagram. Si kastaba ha noqotee, maanta calaamad xaqiijinta waxaa isticmaali kara isticmaale kasta.
Hadda, marka Instagram xaqiijiyo koonto Waxay sidaas u sameyneysaa iyada oo ku saleysan shuruudaha qaarkood iyo astaamaha ay tahay inaad la kulanto markii aad ka codsaneyso calaamadda buluuga ah ee astaantaada. Taasi waa sababta, qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa oo kugu raaci doonnaa hanaankan.
Goorma ayay Instagram xaqiijisaa koonto?
In kasta oo la caddeeyo koonto maahan hawl fudud, haddana suurtagal ma aha. Sababo la xiriira howlaha cusub ee shabakada bulshada ay hirgalisay, isticmaaleyaal badan ayaa awoodi doona inay codsadaan calaamadda buluuga caanka ah. Waa maxay calaamadda buluuga ah? Hagaag, way fududahay, marka Instagram xaqiijiyo koonto u dir qayb cusub astaantaada, taas oo calaamad buluug ah oo ku ag taal magacaaga isticmaale.
Sidaa daraadeed, markaad hubiso koontadaada waxaad siin doontaa bulshada Instagram fahan ah in astaantaadu ay tahay qof dhab ah oo dhab ah "100%" qof. Xaqiijinta noocan ahi waa mid faa iido badan leh haddii astaantaadu tahay mid shirkadeed, maadaama macaamiishaadu ay heli doonaan damaanad ah inaysan ahayn astaan ​​khiyaamo ah; Helitaanka alaabadaada qaab la isku halleyn karo.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Goorma ayey Instagram ku siineysaa calaamadda buluugga ah?
Xaqiijinta koontada waxay u adeegtaa in lagu xaqiijiyo run ahaanta koontada, iyo sida loogu kalsoonaan karo qofka maareynaya. Caadi ahaan, xaqiijintaan waxaa laga helayaa astaamaha danaha dadweynaha, ama kiis kasta oo caan ah. Ok hada marka Instagram xaqiijiyo koonto si taxaddar leh ayuu u sameeyaa, isagoo tixgelinaya dhinacyada qaarkood.
Haddii aad la yaabban tahay haddii koontadaadu ku dhex dhacdo astaamaha suurtagalka ah ee ay Instagram ku xaqiijin karto; gal qaybta xaqiijinta koontada Instagram oo arag shuruudaha. Si aan uga dhigno mid fudud, waxaan xusi doonnaa mowduucyada ugu waaweyn ee danaha dadweynaha ee xisaabta lagu daro marka Instagram xaqiijiyo koonto:
Waxqabadka, muusikada iyo moodelista.
Khabiirro ku xeel dheer moodada iyo quruxda.
Cayaaraha, joornaalada iyo siyaasada.
Taariikhda shirkadaha danta guud.
Aqoonsiga marka Instagram xaqiijiyo koonto Way fududaan doontaa, waa inaad fiiriso haddii calaamad buluug ah ay u muuqato dhankaaga magac-gaaga ama magaca isticmaale kale. Waa wax aad u fudud oo fudud in la helo; Waa mid ay aad u yaqaanaan isticmaaleyaal badan.
Maxaad u baahan tahay inaad ku xaqiijiso koontada Instagram?
Markay Instagram xaqiijiso koonto, ma muujineyso oo keliya inay tahay mid dhab ah, laakiin in faa iidooyin kale la helo, sida caan ka roon iyo kalsooni weyn dhinaca isticmaaleyaasha raaca. Si kastaba ha noqotee, gaarista xaqiijinta barta Instagram waa howl ka fog mid fudud. Caadi ahaan, calaamaddan waxaa loo oggol yahay oo keliya dadka aadka u saamaynta ku leh warshadaha kala duwan ee suuqa hadda jira; Sidaa darteed, la gaaro shuruudaha loogu talagalay marka Instagram xaqiijiyo koonto Waa gebi ahaanba culeys in la wajaho.
Sidoo kale, Instagramku wuxuu tixgeliyaa xisaabaadka halista ugu jira in lagu dhex diro shabakadda bulshada. Way fududahay dadka caanka ah ama noocyada caanka ah ee caanka ah inay helaan calaamaddan, maadaama xaaladdooda la mid ah ay u oggolaaneyso masraxa inuu si fudud ku caddeeyo aqoonsigooda qaab fudud.
Waxyaabaha uu tixgeliyey barta Instagram: Fiiro gaar ah u yeelo!
Sidii aan horay u soo sheegnay. marka Instagram xaqiijiyo koonto Waxay sidaas u tixgelineysaa shuruudaha qaarkood. Way fududahay in lala kulmo haddii aad caan tahay, laakiin Suuragal maahan in xisaabaadka caadiga ah. In kasta oo, xaqiijinta hore ay ahayd mid ka reeban astaanta danta guud; Maanta xaqiijinta waxaa weydiisan kara qof kasta oo isticmaala Instagram. Waa kuwan qodobbada qaar tixgalinta la siinayo marka Instagram xaqiijiyo koonto:
Suurtagalnimada in la iska dhaadhiciyo shabakadda bulshada.
Hayso bog shirkad oo ay xaqiijisay Facebook, oo hadda waxaad ku xireysaa Instagram.
Lahaanshaha tiro badan oo ah raacsan on your Instagram. In kasta oo, tani aysan shardi ahayn oo ay dejisay madal; wax badan ayaa la tixgeliyaa.
Lacala haddii aadan ka soo bixin shuruudaha ugu dambeeyay, ikhtiyaarka kaliya ee aad ku dooran karto xaqiijinta koontadaada ayaa ah inaad dhibbane u ahayd sixir-bararka. Haddii taasi dhacdo, oo ay isku dayeen inay ku muujiyaan adiga, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad tagto bogga Instagram oo aad codsato caddeynta koontadaada.
Haddii aan codsado caddeyn, ma igu deeqi doontaa Instagram?
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, haddii boggaaga Instagram uu leeyahay shuruudo gaar ah waxaad u badan tahay in lagu siiyo xaqiijin. Si kastaba ha noqotee, codsi ma aha dammaanad qaad in lagu siin doono; Wax walba waxay kuxiran doonaan Instagram iyo xaqiijinta xogtaada. Si kastaba ha noqotee, in shabakada bulshada ay go'aansatay inay u furto fursadda bulshada guud ahaan si ay u codsato calaamad xaqiijinta horeba waa horumar.
Sababta ugu weyn ee ay Instagram ugu soo ban dhigeyso fursadan cusub ayaa ah xisaab fara badan oo been abuur ah oo lagu arkay masraxa. Sidoo kale, shabakada bulshada ayaa raadineysa in isticmaaleyaasheeda ay fahmaan geedi socodka ka danbeeya xaqiijinta koontada. Waxay kaloo raadinayaan in shuruudaha xaqiijinta bulshada ay u yaqaanaan bulshada.
Ma loo heli karaa dhammaan nidaamyada hawlgalka?
Waqtiga xaadirka ah, waxaa diyaar u ah dhammaan nidaamyada hawlgalka. In kasta oo markii hore, kaliya dadka iyagu lahaa aaladda iPhone iyo iPad ay dooran karaan doorashadan. Haddaba, codsiga xaqiijinta waa mid fudud; Foomka waxaa lagu weydiin doonaa oo keliya inaad gasho magacaaga oo buuxa, magaca aad isticmaasho, dukumintigaaga aqoonsi ama sawir shaqsiyeed.
Hadda, waxaa la rajeynayaa iyada oo la socota cusboonaysiinta joogtada ah ee ay Instagram ku sii waddo sameynta, mustaqbalka xaqiijinta astaan ​​u helida ayaa u noqon doonta mid u sahlan dhammaan isticmaaleyaasha bulshada. Xilligan xaadirka ah, waxaan kugula talineynaa inaad ka shaqeyso tabaha kala duwan ee xayeysiinta si aad u kobciso xisaabtaada maalinba maalinta ka dambeysa. Inta badan ee raacsane iyo saameynta aad hesho, ayey kuugu fududaaneysaa adiga inaad hubiso astaantaada.
Instagram: Shuruudaha Xaqiijinta
'Instagram' oo ah maanta madal caan ah, waxay leedahay nidaam u gaar ah oo lagu hubinayo xisaabaadka isticmaaleyaasheeda; In kasta oo, nidaamkani uusan aqoon badan u lahayn. Waa maxay aqoonta guud waa in mashiinku qiimeeyo dhowr arrimood markii la hubinayo astaanta Instagram.
Sidaa darteed, waxaan hoos ku sharxi doonaa qodobbada aasaasiga ah ee Instagram ay tixgaliso markay xaqiijineyso koonto isla markaana siinayso calaamadda xaqiijinta. Waxaan kugula talineynaa inaad ka soo baxdid shuruudaha soo socda:
Hubso in koontadaada Instagram ay tahay mid dhab ah maamulkeeduna ku xiran yahay kaliya qof dhab ah; Ha ilaawin isticmaalka barnaamijyada maareynta dibedda. Sidoo kale waa inaad hubisaa in aqoonsigaaga ama ganacsigaaga si sharci ah loo diiwaangaliyay.
Mid kale oo ka mid ah qodobada inta badan lagu tixgeliyo barta Instagram-ka markii la siinayo caddeyn, ayaa ah in koontadaada ay aad caan u tahay. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah ganacsigaaga ayaa loo aqoonsan yahay adduunka oo dhan ama, sababtoo ah waxaad tahay qof aad u doondoonaya isticmaale dadka kale ee adduunka.
Sidoo kale, hubi in koontadaadu leedahay qaabeynta astaanta guud, iska ilow inaad khaas ka dhigtid! Sidoo kale, waa inaad si dhammaystiran u buuxiso dhammaan macluumaadka ku jira astaantaada; xog shaqsiyeed, sawir shaqsiyeed, iyo kuwo kale.
Maskaxda ku hay in koontadaadu ay noqoneyso mid gaar ah, oo leh adeegsi fudud oo la garan karo. Hubso inaysan jirin magacyo la mid ah kan aad lamid tahay.
Sidee loo weydiiyaa Instagram si loo caddeeyo koontada?
Qodobka ugu horeeya ee geedi socodka xaqiijinta koontada waa inaad gasho Instagram oo aad tagtid astaantaada. Marka lagu daro, waa inaad heshaa ikhtiyaaraadka; sida caadiga ah waxay ku taal geeska kore ee sare ee astaantaada. Xulo tan, menu-soo-soo-muuq ayaa la soo bixi doona iyada oo la raacayo waxyaabo kale duwan.
Waxa ay tahay inaad sameyso waa raadinta oo xulo badhanka "Settings"; sumadeeda waxay la xiriirtaa cogwheel, oo ku yaal dhamaadka menu. Ka dib markaad gasho halkaas, waa inaad soo dejisaa oo aad doorataa qaybta "Akoonka" meesha aad ku arki doontid ikhtiyaarka "Dalbo caddeyn"; Badiyaa waxay ku taalaa ikhtiyaarka "Koontada Gaarka ah". Waxaan ku xasuusineynaa in astaantaada guud ay tahay inay ahaato mid dad weyne si ay u codsato caddeyn.
Markaad dooratid ikhtiyaarka "Codsiga xaqiijinta", Instagram wuxuu kugu geyn doonaa bog halkaas oo lagaa rabo inaad ku buuxiso dhowr shuruudood ama xog shaqsiyeed iyo koonto. Kuwaas waxaad ka heli doontaa magac iyo magac, magacaaga u dhigma, haddii aad leedahay magac farshaxan, qeybta aad maamusho, ugu dambayntiina, ku lifaaq sawir dukumenti aqoonsi si aad u caddeyso inaad tahay qof dhammaystiran oo run ah.
Oo diyaar! Kadib markaad buuxiso macluumaadka oo dhan oo aad riixdo badhanka "dir", dalabkaaga waa la dhameystiri doonaa. Marka xigta, waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad sugto Instagram si ay dib ugu eegto dalabkaaga una sameyso cadeynno la mid ah macluumaadka aad bixisay. Marka howshan la idlaado, Instagram ayaa kuu soo sheegi doona haddii ay oggolaadeen dalabkaaga iyo haddii kale.
Markuu Instagram ku siinayo
Markay Instagram kaa xannibaan
Waa maxay quudinta Instagram, ...
Maxay yihiin dareenka ...
Sidee loo ogaadaa cidda qabsata ...
Sida loo abuuro Facebook been abuur ah ...
Your gaadhigii shopping
Dejiyada cookie ee websaydhkan waxaa loo habeeyay inay "u oggolaadaan buskud" oo ay kuu soo bandhigaan khibradaha ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee baarista. Haddii aad sii waddo adeegsiga websaydhka adiga oo aan wax ka beddelin goobahaaga cookie ama guji "Aqbal" waxaad siin doontaa oggolaanshahaaga tan.